संविधानलाई कसरी स्थापित गर्ने ? « Loktantrapost
संविधानलाई कसरी स्थापित गर्ने ?
७ पुष २०७५, शनिबार १६:४०
राजनीति पदार्थ विद्या होइन, यो रसायन विद्या हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नारा ‘शान्ति र समृद्धि’ मुखले बोलेर आउने होइन । यसलाई जनता–जनार्दनको अभ्यासले मात्र पाइने चिज हो । तर संविधानको प्रत्येक बुँदाहरुको अभ्यास भने जनता–जनार्दनबाट विपरित रुपमा गरिएको पाइन्छ ।
विख्यात ग्रीक दार्शनिक राजनीति विज्ञानका ज्ञाता अरस्तुले भनेका छन्–‘जनसाधाराणको कल्याणलाई भुलेर जुन राष्ट्र वा सङ्गठनले कुनै व्यक्ति वा श्रेणीको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्छ भने त्यो राष्ट्र वा सङ्गठन पथभ्रष्ट, उद्देश्यच्यूत वा आदेशभ्रष्ट हुन् ।’ यस्तो राष्ट्र वा सङ्गठनलाई विकृत भनिन्छ । यही टिप्पणीलाई हाम्रो देशको परिस्थिति र इतिहास हेरी भन्न सकिन्छ–कुनै एक वंशले चलाएको शासन वा कुनै एक जातिले चलाएको धर्म पनि विकृति हुन् । किनकि राजतन्त्र एक वंशको स्वार्थसिद्धि थियो । जसको अन्त्य भयो ।
धर्मीय सत्ता पनि एक जातिको स्वार्थ सिद्धीको लागि मात्र भैरहेको छ । एक जाति विशेषको पेवा भइरहेको छ । यसै कारण नयाँ संविधानको धारा १३ ले जाति विशेषलाई खण्डन गरेर समानतामा ल्याएको छ । जाति विशेषको राजावली संस्कारलाई मिल्काएको छ । तर अभ्यास भने केही देखिदैन । पुरानै शैलीमा अभ्यास चलिरहेको छ । नयाँ शैलीमा परिवर्तित देखिदैन ।
संविधानको धारा १३ को व्याख्या यसरी लेखिएको छ –Right to equality (article 13) According to this right all the citizens shall be equal before the law. Nobody shall be deprived of equall protection by law and No discrimination will be made on the basis of religion, race, sex, caste, origin, tribe, language and ideology.
कानुनको अगाडि धर्म पनि समानतामा आउनु पर्यो । यसैकारण धर्मलाई वर्तमान नयाँ संविधानदेखि अलग छुट्याइयो । देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो । नयाँ संविधान कुनै पनि धर्मसित सम्बन्धित रहेन । विश्व इतिहासका घटनाहरुले भन्छ जुन देशले धर्मसित राजनीतिलाई मुछेर संविधान बनायो र शासन चलायो ती सम्पूर्ण देशहरु प्रजापीडक शासक वा देश हुन पुग्यो । सबैका लागि हितकर भएन । रुढीवादी संस्कार मान्ने राक्षसहरुबाट नै देशमा शान्ति र सुरक्षा भएन । यसकारण धर्म पनि रुढीवादी संस्कार नै छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि कति वटा देशहरुमा प्रजापीडक शासन नै चलाइरहेको पाइन्छ ।
विशेष गरेर Islamic Phobia हरु र Hindu Phobia हरु बाट नै गणतन्त्र विरोधि प्रजापीडक शासन चलाइरहेको पाइन्छ । जसलाई अङ्ग्रेजीमा Troika of Tyranny भनिन्छ ।
त्यसैकारण संविधानदेखि रुढीवादी संस्कारलाई हटाएर विज्ञानलाई मात्र समेटियो । धर्म निरपेक्ष भनेको के हो ? व्याख्या यस्तो प्रकारको छ– These will be no ‘state religion’-because the state will not support only particular religion out of public fund.
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संसदमा विपक्षीको रुपमा उभिएर सरकार पक्षको राम्रो वा नराम्रो कामको आलोचना वा समालोचना गर्न पाइन्छ । विपक्षीको भूमिका त्यसरी नै निभाउन पर्छ । त्यो विपक्षीको जिम्मेवारी हो तब मात्र सरकार सही ढङ्ग र बाटोमा हिड्न बाध्य हुन्छ । देशलाई सुबाटोमा हिडाउने अभ्यास हो । नत्र सत्तापक्ष सामन्तीको भूमिकामा राजा हुन पुग्छ ।
देशको जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने शान्ति सुरक्षा र विकासको लागि संविधान लेखियो । संविधान के हो भन्दा व्याख्या यसरी पाइन्छ । The document containing lans and rules which determine and describe the form of the government, the relationship between the citizens and the government is calledaconstitution .
तर यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतीय संविधान लेख्नलाई समय खर्च भयो २ वर्ष ११ महिना १८ दिन तर नेपाली संविधान लेख्नलाई समय खर्च भयो ८ वर्ष ८ महिना २ दिन जहाँ कि भारत क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा २३ गुणा ठूलो छ । अनि जनसङ्ख्याको हिसाबले ४५ गुणा बेशी छ ।
नेपाल अहिले राजतन्त्रको मुकुट फ्याकेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक नेपाल भयो । जसले गणतन्त्रीय ढाँचामा देशको शासन सम्हाल्छ । पूर्व अमेरिको राष्ट्रपति अव्राहम लिङ्कनको भाषामा democracy is generally known as government of the people, by the people and for the people.
तर ब्राह्मणवाद नै यसको मुख्य तगारो भएर उभिएको छ । मुखमा साम्यवाद र समाजवादको भाषण, व्यवहारमा ब्राह्मणवादी शासन । ब्राह्मणवाद अहिले उत्पीडक भएर दुनियालाई सताइरहेको छ । ब्राह्मणवाद सभ्यहरुको देश होइन मुर्खहरुको देश भइरहेको छ । भडुवावाद र कुकर्मको थलो भएर समाजमा भयङ्कर विकृतिको रुपमा देखा पर्दैछ । नयाँ संविधानको अभ्यासमा घातक सिद्ध भइरहेको छ । ब्राह्मणवादी मानसिकता परिवर्तन हुन चाहँदैन नयाँ संविधानलाई आत्मसाथ गर्न चाहँदैन । यथास्थिति रुपमा राख्न चाहन्छ । मौलिक अधिकारको कही सुरक्षा छैन मिचेर बोलिदैछ । यसैकारण देश विकृतिले गाँजिरहेको छ । कानुन एउटा कागजको पोको मात्रै हो त्यो कहिले पनि देशको हित र सुरक्षाको लागि अभ्यासमा आउँदैन । ब्राह्मणवाद मनपरि बोल्ने र मनपरि गर्ने प्रजापीडक क्रुर शासनको रुपमा भूमिका खेलिरहेको छ । धर्मको अभ्यास होइन कानुन अभ्यास गरे मात्र शान्ति सुरक्षा आउँछ । किनकि धर्म भन्दा कानुन ठूलो हो कानूनले देश चलाउँछ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ । धर्मले केही गर्ने होइन । धर्म निष्क्रिय हो कानुन सक्रिय हो । धर्म भनेको मनको भ्रम र अन्धविश्वास मात्र हो ।
मैले ब्राह्मणवादलाई घोचेको होइन नत हिंसा गरेको हुँ । राष्ट्र विज्ञानका तर्कहरु पेश गरेको हुँ । जो नयाँ संविधानको धाराहरुमा उल्लिखित छन् । रिसायनी माफ होला । यूक्तिसङ्गत तर्कहरु पेश गर्नु गणतान्त्रिक अधिकार हो । नत्र नयाँ संविधानलाई स्थापित गर्न सकिदैन । किनकि कानुनी राज्य बनाए कसैलाई अत्याचार हँुदैन । कानुनी राज्यमा कसैको हक अधिकार लुटिदैन । कानुनले सबैको रक्षा गर्छ । यसकारण मुलुकलाई कानुनी राज्य बनाउन आवश्यक छ । सबैमा कानुनी ज्ञान होस् ।
कानूनले पनि मानिसलाई सभ्य बनाउन चाहेको हो । मुलुकलाई सभ्य बनाउन हामीले कानुनको अभ्यास गर्नैपर्छ । कानुनको किताबमा कहा पाइन्छ भनेर भौतारिहिँड्ने आवश्यकता पर्दैन । सबैको घरघरमा आफनै छोरा–छोरी वा विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम मार्फत अध्ययन भइरहेको छ ।
त्यसलाई पढेर राम्रोसितले बुझेर अभ्यास गरे हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत निवेदन भनेको सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्ग जसले वर्तमान संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकारको धारा १२ देखि ३२ सम्म पठनक्रम मार्फत पठनपाठन भइरहेको जानकारी अभिभावकहरुमा गराएर अत्यन्त वेश हुनेछ । संविधानको अभ्यासमा सहयोगी भूमिका हुनेछ । नयाँ संविधानलाई समाज र देशमा स्थापित गर्न र कानुनी राज्य बनाउन गाह्रो पर्दैन ।
मेचीनगर–२, झापा (मो. ९८०४९१०५४०)